कोरोना विरूद्वको खोप लगाउनेलाई १० करोडको चिठ्ठा ! - Sidha News
कोरोना विरूद्वको खोप लगाउनेलाई १० करोडको चिठ्ठा !
काठमाडौं । गरिब मुलुकहरु कोरोना खोप अभावमा छटपटाइरहेका बेला धनी मुलुकहरुलाई भने बेग्लै तनाव छ । अमेरिका, बेलायत लगायतका धनी देशहरु आफ्ना नागरिकलाई चाहिने भन्दा निकै धेरै खोप थुपारेर त बसिरहेका छन्, तर उनीहरुको नागरिकले खोप लगाउन नमानेर सरकार हैरान छ ।
अमेरिकामा पहिलो डोज खोप लिएका झण्डै ५० लाख मानिस दोस्रो खोप लगाउनै आएनन् । हङकङमा निःशुल्क खोप सुरु भएको तीन महिना बित्दा जम्मा १८ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन् भने १२ प्रतिशत हाराहारीले मात्र दुवै डोज लगाएका छन् । कोरोना खोपप्रति नागरिकले यस्तो चरम अनिच्छा देखिएपछि अमेरिकाको ओहायो राज्यले अनौठो स्किम निकालेको छ ।
नयाँ स्किमअनुसार कोरोना खोपको पहिलो डोज लगाउनेमध्ये ५ जना भाग्यशाली मानिसले एक–एक मिलियन डलर (झण्डै १०–१० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुरस्कार जित्नेछन् । सरकारको यो घोषणाले खोप अभियानमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ । स्किम घोषणाको दुई दिनपछि गत सोमबार एकै दिन २५ हजार ४ सय जनाले खोप लगाए, जुन गत तीन साताको सबैभन्दा उच्च हो ।